MUQDISHO: Qaar Ka Mid Ah Raggii Weeraray Madaxtooyada Oo Iyagoo Bad-Qaba Dib Uga Laabtay Goobta Dagaalka + SAWIRRO - FOOLAAD MEDIA
Home » Wararka » MUQDISHO: Qaar Ka Mid Ah Raggii Weeraray Madaxtooyada Oo Iyagoo Bad-Qaba Dib Uga Laabtay Goobta Dagaalka + SAWIRRO
MUQDISHO: Qaar Ka Mid Ah Raggii Weeraray Madaxtooyada Oo Iyagoo Bad-Qaba Dib Uga Laabtay Goobta Dagaalka + SAWIRRO
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar khasaara badan dhaliyay oo shalay ka dhacay goobo ammaankooda si aad ah loo adkeeyo oo dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Muqdisho.
Weerarka oo ahaa mid aad u xooggan ayaa ku bilawday laba qarax oo Mataana ah kadibna xoogag hubeysan ayaa xoog ku galay bar koontarool oo ciidamada DF-ka ay ku leeyihiin waddooyinka laga ilaaliyo madaxtooyada Villa Somaliya.
War kasoo baxay Xarakada Al-Shabaab ayay ku sheegtay in 12 askari ay ku dishay weerarka isla markaana ay iyagoo bad-qaba dib usoo laabteen qaar ka mid ah raggii weerarka fuliyay.
“12 ka tirsan Murtadiinta ayaa ku dhintay weerarkii maanta ka dhacay Madaxtooyada, qaar ka mid ah mujaahidiintii weerarka fuliyayna dib ayay u soo laabteen iyagoo bad-qaba” ayaa lagu yiri war lagasii daayay idaacadda Andalus ee ku hadash afka Xarakada Al-Shabaab.
Saraakiisha dowladda Federaalku waxay sheegeen in weerarkii maanta lagu dilay 10 qof oo 7 ka mid ah ay ahaayeen ciidamadii ilaalada ka hayay madaxtooyada balse ilo-wareedyo kale ayaa sheegaya in khasaaruhu intaas ka badan yahay.
Wakaaladaha wararka oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan Booliska DF-ka ayaa sheegaya in ciidamada Al-Shabaab ay isku dayayeen in ay gudaha u galaan xarunta madaxtooyada si ay halkaas ugu dilaan madaxda dowladda.
Waddooyinka soo gala madaxtooyada Villa Somaliya ayaa maanta isku bedelay goob dagaal waxaana la arkayay ciidamo wata gaadiidka dagaalka oo gaaf-wareegaya kadib markii uu soo idlaaday weerarku.
Weerarkani wuxuu imanayaa 8 maalmood kadib markii weerar askar iyo saraakiil lagu dilay uu isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay xarunta Ota Ota oo ay ku shaqeeyaan wasaaradaha arrimaha gudaha iyo ammaanka waxaana dhammaan mas’uuliyadda weeraradan sheegatay xarakada Shabaabul Mujaahidiin.